Shidaalka iyo ganacsatada Sudan - BBC News Somali
Shidaalka iyo ganacsatada Sudan
12 Jannaayo 2011
Image caption Saldhigyada saliida shidaalka ee Sudan
Sudan ayaa ah wadanka saddexaad ee Afrika ee dhoofiya saliida shidaalka. Inkastoo ay socoto aftida loo qadayo madaxbaaninada koonfurta Sudan, laakiin gobolka Abyei ee shidaalka laga soo saaro ayaa wuxuu ku yaalaa koonfurta Sudan laakiin dhuumaha laga dhoofiyo saliida shidaalka ayaa waxay ku yaaliin waqooyiga Sudan.
Gobolka Abyei wali way isku haystaan koonfurta iyo waqooyiga Sudan, walina afti lagama qaadin gobolka inay rabaan inay ku biiraan waqooyiga iyo inay rabaan inay ku biiraan Koonfurta Sudan.
Koonfurta iyo waqooyiga Sudan ayaa waxay qayb sadaan lacagta ka soo gasha shidaalka Sudan.
Heshiiska ay koonfurta iyo waqooyiga Sudan ku qayb sanaayaan lacagta ka soo gasha saliida shidaalka ayaa lagu gaaray heshiiskii nabada ee 2005tii, heshiiska ayaa wuxuu dhici doonaa waqti dhow waxaana u socda wadahadal koonfurta iyo waqooyiga Sudan sidii loo gaari lahaa heshiis cusub.
Laakiin tan iyo 2005tii labada dhinac waxaa ka dhaxeeyay is aaminid la'aan in si daacad ah lacagta looqaybsado, iyo in dowladda khartuum ay sheegto lacagta dhabta ah ee ka soo gasha shidaalka.
Hay'adda ka hortaga musuq maasuqa ee Global Witness ayaa ku baaqaysa in heshiiska cusub ee la samayn doono in lacagta shidaalka lagu kala qaybsado, inuu ahaado mid loo wada jeedo lacagta laga helo shidaalka.
Wariyaha BBCda Mark Lobel ayaa warbixin ka soo diray.
Ganacsatada Soomaalida ee Sudan
Ganacsato badan oo Soomaali ah ayaa joogta koonfurta Sudan waxayaabaha ay ka ganacsadaan waxaa ka mid ah shidaalka, waxayna leeyihiin kaalimo shidaal iyagoo shidaalka geeya dalalka bariga Afrika, qaar kalena waxay leeyihiin tukaamo, maqaayado iyo xawaalado.
Wariyaha BBCda Bashkas jug soo dhacay oo jooga magaalo madaxda koonfurta Sudan ee Juba, ayaa la kulmay qaar kamid ah ganacsatada soomaaliyeed ee magaalada Juba ee koonfurta Sudan.